रवि ओडलाई हराउन यस्तोसम्म हर्कत ! – Everest Dainik – News from Nepal
रवि ओडलाई हराउन यस्तोसम्म हर्कत !
काठमाडौं, मंसिर २० । अहिले ‘नेपाल आइडल सिजन–२’ चलिरहेको छ । आइडलको रौनकले चौतर्फि छोएको छ । नेपाल आइडलमा पाँचजना मात्र प्रतिस्पर्धी बाँकी रहेकाले यसको रोमाञ्चकता बढ्दै गएको हो ।
बाँकी रहेका पाँचजनाले आज (बिहीबार) ‘टप फोर’ मा स्थान बनाउन प्रस्तुति दिदै छन् । पाँचै प्रतिस्पर्धीका समर्थक अहिले निकै व्यस्त छन् । उनीहरुको व्यस्तता आफूले मन पराएका प्रतिस्पर्धीलाई जिताउनमा रहेको छ ।
अधिकांश समर्थकले सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न सञ्चारमाध्यम एवं अन्य उपाय अपनाइरहेका छन् । आफूले मन पराएको प्रतिस्पर्धीलाई भोट दिन पाउनु, प्रचार गर्न पाउन स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर, प्रतिस्पर्धीको नक्कली ‘फेसबुक आइडी’ खोलेर दूरुपयोग गर्नु चाहिँ पक्कै पनि राम्रो होइन । यो एक हिसाबले अपराध नै हो ।
यस्तै गलत कार्य भइरहेको पाइएको छ । आइडलमा बाँकी रहेका रवि ओडको नाममा ‘नक्कली फेसबुक आइडी’ बनाएर कतिपय व्यक्तिले दूरुपयोग गरिरहेका पाइएको हाे ।
रविको व्यक्तिगत एक मात्र फेसबुक आइडी छ । तर, अधिकांश व्यक्तिले दूरुपयोग गर्ने तरिकाबाट आइड बनाएका छन् । र, त्यसको दूरुपयोग गरिरहेको भेटिएको हो ।
रविको एकमात्र आइडको फोटो यस्तो छ- यो मात्र उनको आइडी हो !
रविका समर्थकले उनको आइडी हो भनेर कुरा गर्दा नक्कली आइड बनाएर फेसबुक चलाउने व्यक्तिले विभिन्न कुराहरु पठाउने गरेका छन् । एकजना रविका समर्थकले उनको नामको आइडीमा कुरा गर्दा यस्तो लेखिएको सन्देश आएको थियो । यो आजको कुरा हो-
यस्तो हर्कत गर्ने व्यक्ति पक्कै पनि कतैबाट प्रयोग भएका हुनसक्छन् । यसकारण यस्तो कार्य जोसुकै भएपनि गर्न र गराउनुहुन्न । नेपाल आइडलमा आज ‘टप फोर’ का लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । अब आइडलमा रवि ओड, बिक्रम बराल, सुमित पाठक, अस्मिता अधिकारी र अमित बराल बाँकी छन् ।